Amaphiko enkukhu ane-curry ebhakwe, ecebile futhi kulula ukuyilungisa. | Ukupheka Kwekhishi
Amaphiko enkukhu abilisiwe
UMontse Morote | 13/05/2021 09:00 | Okufakiwe Okushisayo, Inyama Ungadliwa
Amaphiko enkukhu abilisiwe, enye indlela yokudla amaphiko, kimi into enhle kakhulu ngenkukhu. Ahle kangakanani amaphiko, ayashwabana futhi amnandi kakhulu. Nginesiqiniseko sokuthi nawe uyabathanda !!!
Singazilungiselela ngezindlela eziningi, ngososo, othosiwe, osolwandle sizinikeze ukunambitheka esikuthandayo ngezindlela eziningi futhi sizenze zikhanye zingalungiswa kuhhavini.
ICurry ingxube yezinongo ezinambitheka eningi, ilungele ukugqoka inyama njengenkukhu.
Le recipe kulula ukuyilungisa, inezithako ezimbalwa futhi ezilula, i-curry sauce ilungiswa nge-yogurt kanye ne-curry spice. Ilungele isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa somndeni wonke.
Isikhathi Sokulungiselela: 40 m
Isikhathi esiphelele: 1 h 30 amaminithi
1 ikhilo lamaphiko
1-2 i-yoghurt enokhilimu noma yamaGrikhi
2 uketshezi lwesipuni ukhari
Ama-chives aqoshiwe noma i-parsley
Ukulungisa amaphiko ezinkukhu nge-curry kuhhavini, sizoqala ngokuhlanza amaphiko, bese sihlukanisa izigubhu ezivela emaphikweni. Sabeka usawoti omncane nopelepele. Silungisa i-sauce, endishini sifaka iyogathi, isipuni samakhekhe noma iparsley, sifaka amathisipuni e-curry, i-garlic egayiwe. Sihlanganisa konke kahle.
Faka amaphiko enkukhu endishini ne-sauce elungisiwe, usabalalise uhlanganise amaphiko kahle. Sibadlulisela esitsheni sokubhaka. Sibavumela baphumule isikhashana, ubuncane bemizuzu engama-30.
Sifaka ihhavini ngo-200ºC, sibeka umthombo ngezimpiko ezibhakiwe. Sizobaphendula ukuze babe nsundu kahle yonke indawo. Sizobashiya baze babe segolide. Cishe imizuzu engama-40-50.
Lapho sezikhona siyakhipha futhi silungele ukudla !!!
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » Okufakiwe Okushisayo » Amaphiko enkukhu abilisiwe